Voka-panadihadiana tany Antsirabe :: Matin’ny entona misy poizina izy enina mianaka - ewa.mg
News - Voka-panadihadiana tany Antsirabe :: Matin’ny entona misy poizina izy enina mianaka
Nifanojo tamin’ny vokatry ny famotoran’ny Zandarimaria ny valin’ ny fizahana nataon’ny mpitsabo tamin’ireo eni-mianaka, reny sy ny zanany dimy, izay nindaosin’ny fahafatesana tany Maromandraisoa-Tsarahonenana, any Antsirabe II, tamin’ny 12 septambra lasa teo. Nanasongadina ny fisian’ny fahasemporana ireo zandary, raha nampahafantatra ny fisian’ny poizina avy amin’ny fofon’ arina tao amin’ny trano nitoeran’izy eni-mianaka ireo ny mpitsabo. “Fahafatesana avy amin’ny fahasemporana hatramin’ny 90% no nihatra tamin’ireo olona ireo”, hoy iretsy farany.
Voarakitry ny fitanana an-tsoratra nataon’ireo mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana, taorian’ny loza, ny nahitana arina fandrehitra mitsitokotoko efa lasa lavenona tao ambany rihan’ny trano nahitana ny razan’izy enina mianaka. Mbola nahitana arina fandrehitra mivaingana mitsitokotoko ihany koa, tsy lavitra teo. Tsiahivina fa ny raim-pianakaviana nody tao antrano nahita azy eni-mianaka nitsotra teo am-pandriana saingy efa samy tsy nisy aina intsony,tamin’ny sabotsy lasa teo.
L’article Voka-panadihadiana tany Antsirabe :: Matin’ny entona misy poizina izy enina mianaka est apparu en premier sur AoRaha.
Tratra am-body trano ! Lehilahy iray no voasambotry ny pôlisy avy etsy amin’ny boriborintany fahavalo Analamahitsy raha saika hamaky tranon’olona iray teny amin’iny faritra Ankerana iny, ny faran’ny herinandro teo. Tsy nampoizin’ilay ranamana ity tokoa fa nisy « camera de surveillance » ilay trano, izay nahitàna azy tsara nivezivezy nitady hirika hamahana varavarana. Tokony ho tamin’ny roa ora maraina tokoa dia taitra ny tompon-trano fa naheno olona nivezivezy tao an-tokontany. Nojerena avy hatrany amin’ilay alalan’ny « camera » izany ary hita teo tokoa ity olon-dratsy. Niantso pôlisy avy hatrany ireto voatafika, ary tonga haingana teny an-toerana ireo mpitandro filaminana. Asa na mahana tamin’ny fikoropahana tao an-trano angamba ilay mpangalatra ka lasa nandositra, saingy nifanena tsara tamin’ireo pôlisy. Rehefa nosavaina dia mbola nahitàna fitaovana maromaro, toy ny baramina sy « pince » maromaro tany aminy. Niaiky ihany koa ingahirainy fa niomana ny hamaky io trano io tokoa izy, rehefa nitady nandritra ny fotoana maro, izay trano mora novakiana teny an-toerana. Natolotra teny anivon’ny Fampanoavana moa ity lehilahy ity taorian’ny fanadihadian’ireo mpitandro filaminana ary nadoboka am-ponja avy hatrany. m.LL’article Ankerana : Jiolahy tra-tehaka saika hamaky trano a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Saron’ny Zandarimariam-pirenena, tao Ampasimbary, kaominina ambanivohitr’Antafiambotry, ao amin’ny distrikan’Ambanja, ireo olona fito ambin’ny folo nikasa hiondrana an-tsokosoko ho any Mayotte, tamin’ny sabotsy lasa teo. Olona avy any Mahajanga, Nosy Be, Antsiranana sy avy any amin’ny faritra Sava ireto niaraka tamina sambo (La Coque) ireto, araka ny fanazavana avy amin’ny Zandarimariam-pirenena avy any Ambanja. Miisa roapolo izy ireo no niaraka tamin’ity sambo ity, araka ny loharanom-baovao, saingy tsy hita ireo mpandeha telo. Efa nandoa saran-dalana avokoa izy ireo, araka ny fantatra. Mitentina 2 800 000 ariary no efa naloan’izy ireo, araka ny fantatra. Vela-pandrika nataon’ny zandary, notarihin’ny Lietna Antrefinomenjanahary Solofo sy ny ekipany, no nahatrarana an’ireto andian’olona nikasa hiondrana an-tsokosoko ho any Mayotte ireto. Nomarihan’ny zandary tany an-toerana fa efa fomban’ilay mpitondra an’io sambo io izao, saingy tamin’ity indray mitoraka ity vao sarona izy. L’article Fiondranana an-tsokosoko :: Tra-tehaka ireo olona fito ambin’ ny folo saika ho any Mayotte est apparu en premier sur AoRaha.
Fandraikiraikena: voasambotra ireo mpisoloky milaza ho mpanamboatra vola
Tsy lany paika ny olon-dratsy. Voasambotra tao Antsirabe ny asabotsy teo ny mpisoloky milaza ho mahavita vola tena izy amin’ny alalan’ny ravin-taratasim-bola ampiarahina amina akora.Mpisoloky miisa telo, ahitana lehilahy roa sy vehivavy iray, voasambotry ny zandary tao An­tsirabe ny asabotsy teo. Milaza ho mahavita lelavola tena izy amin’ny fampiasana taratasy fanamboarana vola izy ireto. Misy akora ampiarahina sasàna amin’izany ahazoana vola tena izy. Nahazo angom-baovao ny zandary, ny 16 jolay teo, fa misy olona mpanamboatra vo­la ao Antsirabe. «Rehefa izany, nanaovana tatitra avy hatrany ny fitsarana ary nahazo alalana hanao fizahana sy fisamborana ny zandary», hoy ny fanazavan’ny zandarimariam-pirenena, loharanom-baovao. Napetraka nanaraka izany koa ny paikady hihaonana amin’ireo olona ireo. Nihaona mi­van­tana tamin’ny ramatoa iray ny zandary. «Nilaza ilay vehivavy fa misy mpiasan’ny banky foibe eto Antananarivo afaka mamoaka ravin-taratasy fanamboarana vola. Misy koa ny akora ampiarahina amin’ireo taratasy ireo ka rehefa sasàna miaraka ireo, vola 20 000 Ar sy 10 000Ar no mivoaka. Vola tena izy fa tsy sandoka», hoy hatrany ny zandary.Sarona tamin’ny vela-pandrikaRaikitra ny fifanarahana teo amin’ny roa tonta hanaovana andrana ny asabotsy teo. Nomena ireo mpisoloky ny vola mitentina 10 tapitrisa Ar, niaraka amina ravin-taratasim-bola sy akora ahavitana vola mitentina 30 tapitrisa Ar. Natao ny fifanakalozana tao amina hotely iray eny Amba­vahadimangatsiaka, toerana nifanomezan’ny roa tonta fo­toana. Nitondra ravin-taratasy voadidy mitovy habe amin’ny vola 10 000 Ar ireo mpisoloky izay voafono tao anaty «papier alu» sy akora. Ilay zandary kosa, nitondra vovo-tsavony sy «seringue». Rehefa natao ny fanandramana, nivoaka ny vola 40 000 Ar tamin’ireo vola 10 000 Ar. Hakingan-tanana anefa no ataon’ireo mpisoloky amin’izany. Vokany, nantsoina ireo zandary efa niandry tsy lavitra teo ka tratra am-bodiomby ireo olon-dratsy.Henintsoa HaniL’article Fandraikiraikena: voasambotra ireo mpisoloky milaza ho mpanamboatra vola a été récupéré chez Newsmada.